ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
ဘွိုင်လာဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး,မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး,High Quality သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာ
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဘွိုင်လာဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး,မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး,High Quality သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာ
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး > ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်း
ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းထဲမှာ, ဒေါင်လိုက် filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်းတဲ့ box ကိုတစ်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တစ်ဦးလေကြောင်းဝင်ပေါက်ပိုက်ပြီးအိပ်ဇောပိုက်၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လေထုဟာဝင်ပေါက်ပိုက်ထဲသို့ဝင်သောအခါ, ဖိအားထို့နောက် box ထဲမှာမြေမှုန့်ပြာရေပုံးမှ filtered သည်လေထုစီးဆင်းမှုမှတစ်ဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးချနေသည်, ထို့နောက်နောက်ကျောထိုးနှက်ထွက်ယူသွားတတ်၏နှင့်ဖုန်မှုန့်လေထဲကဆေးရုံကဆင်းသည်။ အဆိုပါပြွန်တစ်ရိုးရှင်းပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမြေမှုန့်စုဆောင်းတူသည့်တိုက်ရိုက် discharge ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်မီးခိုးရောင်နည်းလမ်းကနေခိုင်မာတဲ့ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါဒေါင်လိုက် filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်းထိုကဲ့သို့သောဘောဇဉ်, အစားအစာစက်ရုံ, ရာဘာ, ဂဟေနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအဖြစ်အများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုဒါကြောင့်ဒေါင်လိုက် filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလုပ်နေလဲသလဲ?
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒေါင်လိုက် filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနေသောခေါင်းစဉ်:
1. သောကြောင့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု၏, ထို filter ကို၏သိပ်သည်းဆကြီးမားသည်, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာပမာဏသေးငယ်သည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်နှင့် filter ကိုပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
2. filter ကိုကျည်တောင့်၏အမြင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သေးငယ်တဲ့ install လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်း, သေးငယ်သည်။
3. တူညီသောအသံအတိုးအကျယ်ဒေါင်လိုက် filter ကိုကျည်တောင့် filter ကိုပိုကြီး filtration ဧရိယာသေးငယ် filtration အမြန်နှုန်းနှင့်လျော့နည်းခုခံရှိပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဘွိုင်လာဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး , High Quality သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာ , မိုင်းအဘို့မြေမှုန့်ကောက်ခံရေး , ဆောက်လုပ်ရေးဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ , ဘွိုင်လာစိုစွတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , အငွေ့စင်ကြယ်စေခြင်းဖယ်ရှားရေး , G ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး